၆ လအတွင်း အလုံးရေ ၁၅ သန်းရောင်းချရပြီးဖြစ်တဲ့ Redmi Note7Series
10 Jul 2019 . 12:42 PM
Xiaomi ကနေ Redmi ကို သီးသန့် Brand တစ်ခုအနေနဲ့ ခွဲထုတ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးဖုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Redmi Note7က လက်ရှိ Xiaomi ကနေ ထုတ်ခဲ့သမျှ စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံးလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Xiaomi ကနေ ဒီ Redmi Note7Series စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ရောင်းအားကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလတုန်းက Xiaomi ကနေ ဒီ Redmi Note7Series စမတ်ဖုန်းတွေက အလုံးရေ ၁၀ သန်းကို ၁၂၉ ရက်အတွင်း ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာဆိုရင် မိတ်ဆက်ပြီး ၆ လအတွင်းမှာတင် အလုံးရေ ၁၅ သန်းရောင်းချခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Xiaomi ကနေ ဒီ Redmi Note7စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကိုပါ လျော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။
Xiaomi ကနေ အခုအချိန်မှာ Redmi Note7RAM 6GB + 64GB Version ကို 1,399 Yuan ကနေ 1,199 Yuan ကို ချပေးခဲ့ပြီး RAM 6GB + 128HB Version Redmi Note7Pro ကိုလည်း 1,599 Yuan ကနေ 1,399 Yuan အထိ ချပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ Xiaomi Redmi Note7Series ဖုန်းတွေရဲ့ ရောင်းအားကတော့ မတရားကောင်းနေတာကတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။
Ref : Gizmo China
by Nigma . 1 hour ago